ကမ်ဘာအေးဗီလာထဲတွင် Luxury Classic လုံးချင်းအိ...
ခြံအကျယ် 85’ x 110’, အိမ်အကျယ် 75’ x 75.............Master Bedroom (၄) ခန်း နှင့် Maid Room, Living...
ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်တွင် အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး အသင...
ပိုင်ရှင်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရန် - Daw Cho ( 095089789 )
Posted on Aug 8 2019
မရမ်းကုန်း၊ ၇ မိုင် Villa ရှိ ငှားရန်ရှိသော...
Unicode# မရမ်းကုန်း၊ ၇ မိုင် Villa၊ 3RC, 9660 Sqft, 4MBR, 2BR, အိမ်အကူ 1 ခန်း၊ 10 AC, အဆင့်မြင့်ပြ...
ဗဟန်း၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရားအနီးရှိ ငှားရန်ရှိသော လ...
Unicode# ဗဟန်း၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရားအနီး၊ 2RC, 8200 Sqft, 2MBR, 3BR,7AC, ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ - 250...
_ဒဂုံ၊သံတမန်လမ်း 80x90. 2RC ,M4, S2. (ပြင်ပြီး) 5000 USD 09422888852,09422888853,09422888854
80x90 (7200sqft) ft2
ငှားရန် - လုံးချင်းအိမ် -